Muuri News Network » Gool Uu Dhaliyay Waqtiga Dhimashada Marcus Rashford Oo Ka Saaciday Man United Inay Ka Badiso Hull City Oo Madax Adeyg Ku Muujisay Garoonkeeda. Waxaa Qoray: Saed Balaleti
Gool Uu Dhaliyay Waqtiga Dhimashada Marcus Rashford Oo Ka Saaciday Man United Inay Ka Badiso Hull City Oo Madax Adeyg Ku Muujisay Garoonkeeda. Waxaa Qoray: Saed Balaleti
Gool uu dhaliyay waqtigii dhimashada ciyaarta Marcus Rashford ayaa ka saaciday inay Manchester United ka talaabsado Hull City oo madaxa adeyg muujisay habeen roobaad oo garoonkeeda marti loogu ahaa, waxaana kooxda Mourinho ay gaartay guushii 3aad ee isku xigta ee xilli ciyaareedka Premier League.
Tababare Mourinho ayaan waxba ka bedeli shaxdiisa kulankii isbuucii hore isagoo mar kale ku soo bilaabay xiddiga dunida ugu qaalisan Paul Pogba kaasoo ciyaaray kulankiisii labaad ee xilli ciyaareedka Premier League, halka Zlatan Ibrahimovic uu mar kale afka hore ku soo bilowday.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbaro goolal la’aan ah iyadoo garoonka KCOM Stadium uu roob badan ka da’ ayay. Kooxda martida aheyd ee Red Devils ayaana gacanta sarre laheyd ciyaarta iyagoo ku dhawaaday inay shabaqa soo taabtaan dhowr jeer.
Fursadihii ugu fiicnaa ee qeybta hore waxaa helay Wayne Rooney iyo kubad cirib halis ah uu isku dayay Zlatan Ibrahimovic laakiin Hull City ayaa u babac dhigtay.
Dhanka kooxda martida loo ahaa markii ay ugu halista badnaayeen qeybtii hore waxa ay aheyd laad xor ah oo ay heleen taasoo halis aheyd balse hareer martay goolka.
Qeybtii labaad waxa ay aheyd si isku mid ah iyadoo ciyaarta ay hal dhinac u socotay, Man United ayaana gool ka raadineysay Hull City iyagoo helay fursado waa weyn, Zlatan Ibrahimovic ayaa mar kale u dhawaaday inuu shabaqa soo taabto halka Pogba iyo Mata ay iyagana nasiibkooda tijaabiyeen.
Daqiiqadii 80aad daafaca Hull oo si fiican u ciyaaray caawa ayaa ku dhawaaday inuu gool iska dhaliyo, labo daqiiqo ka dib Rashford oo bedel ku soo galay islamarkaana ay si fiican iskula ciyaareen Mkhitaryan ayaa isagana kubad laga badbaadiyay, iyadoo Jakupovic uu isna si degdeg ah u badbaadiyay kubad goolka ku socotay ka dib karoos uu dhigay Valencia.
Dhamaadkii ciyaarta Paul Pogba iyo Mkhitaryan ayaa iyagana nasiibkooda tijaabiyay laakiin hadana waa ay noqon weysay, iyadoo United ay isku dayaysay wax walba oo karaankeeda ah sidii ay shabaqa uga soo taaban lahaayeen Hull City.
Daqiiqadii 2aad ee afar daqiiqo oo dheeri ah oo ciyaarta lagu daray, da’ yarka weerarka ka ciyaara Marcus Rashford ayaa Manchester United u dhaliyay goolka guusha ee ay u qalmeen, Rooney ayaa si wacan u soo dhisay isagoo la soo maray El Mohamady ka hor inta uusan u dhigin Rashford kaasoo shabaqa ku taabtay.